Sidee Isticmaalayaashu ula falgalaan Pinterest | Martech Zone
Toddobaadkan waxaa la igu casuumay inaan ka mid noqdo guddi la hadlaya hal-abuurka gobolka (maqal waa halkan) kulan kulan Magazine Qaabka. Waxaa laga yaabaa in ka badan koox kasta oo kale, hal-abuureyaashu waxay leeyihiin fursad aan caadi ahayn oo ay uga faa'iideystaan ​​isku-xidhka bulshada ee muuqaalka ah sida Vine, Instagram or Pinterest.
Tani faahfaahinta hagaha muuqaalka ah sida adeegsadayaashu ula falgalaan biinanka, looxyada, isticmaaleyaasha kale iyo noocyada ku yaal Pinterest. Ka soo Rajo
Tirakoobkii ugu horreeyay ee shirkadda Pinterest ayaa ka hadlay korsashada degdegga ah ee farshaxanno, farshaxanno iyo fashionistas. Si kastaba ha noqotee, markii aan bilownay Macluumaadka Suuqgeynta guddiga, waxaan ahayn oo aan la yaabnay taraafikada weyn ee aan sii wadno inaan helno. Pinterest waa barxad muuqaal oo awood leh maxaa yeelay way fududahay in bog lagu dhex mariyo boqolaal muuqaal illaa uu midkood ishaadu qabato.
Tags: isdhexgalkaka faa'iideyso pinterestPinteresttirakoobyada pinterest
Feb 26, 2013 markay ahayd 2:51 PM
Waxaan jeclaan lahaa inaan bilaabo inaan xuso inaan ahay nuugaya macluumaadka-sawirada sidaa darteed, dabcan waan aqrin lahaa tan!
Waan jeclahay Pintrest iyo sida dumar ah, arday jaamacadeed waxaan in yar ku qaataa "biinida". Anigoo ah xiriirka bulshada iyo ardayda xayeysiinta ah, kama caawin karo laakiin waxaan xiiseynayaa doorka Pintrest ee saameynta dhaqanka macaamiisha. Waxaan u maleynayaa in boggaga sida Pintrest ay yihiin hab qurux badan oo lagu helo xayeysiin bilaash ah! Waxaan u maleynayaa in mustaqbalku uu noqon doono habab badan oo hal abuur leh oo si qarsoodi ah loogu xayeysiinayo iyo xayeysiinta nolosha dadyowga, kuna wareegaya baraha bulshada.